एक अपरिचित युवा मोटरसाईकल सहित अचेत अवस्थामा फेला, आफन्त सम्म पुर्याउन सक्दो सेयर गर्नु होला। | समाचार
एक अपरिचित युवा मोटरसाईकल सहित अचेत अवस्थामा फेला, आफन्त सम्म पुर्याउन सक्दो सेयर गर्नु होला।
June 7, 2021 NepstokLeaveaComment on एक अपरिचित युवा मोटरसाईकल सहित अचेत अवस्थामा फेला, आफन्त सम्म पुर्याउन सक्दो सेयर गर्नु होला।
चौदण्डीगढी नगरपालिका १० खैराझोडामा एक युवा मोटर साईकल सहित अचेत अवस्थाम फेला परेको छ । नाम पहिचान नखुलेको अन्दाजी २६–२७ बर्ष उमेरका युवा मदन भण्डारी राजमार्गको गाईघाट तर्फको लोकेशनमा अचेत अवस्थाम रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारले जनाएको छ ।
मध्यान्न १२ बजेको समयमा अचेत अवस्थामा रहेको युवा हाल धरानको घोपामा उपचार भइरहेको कुरा बेल्टार प्रहरीको आधिकारीक फेसबुकमा उल्लेख गरिएको छ ।
पहिचान नखुलेकाले ब्यक्तिको नाम ठेगाना पत्ता नलाग्दा अनुसन्धान गर्न समस्या भएको छ । प्रहरीले यस पोष्टको आधारमा आफन्तहरुले बेल्टार प्रहरीलाई खबर गर्दिन पनि स्टाटसमा लेखिएको छ ।
प्रदेश २–०१–००१– प २९५६ नं को मिलिटरी ग्रिन रङका ँश्–क् ख्भचकष्यल को मोटरसाईकल सहित अचेत अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । निज मोटर साईकल चालक हाल सम्म पनि अचेत अवस्थामै रहेको हुदाँ निजको यकिन वतन र आफनतको समेत पहिचान नभएको नहँुदा उक्त व्यक्ति र मोटरसाईकल धनिले ई.प्र.का. बेल्टारमा नः ०३५–४४०१००, ९८५२८९०३५५ मासम्पर्क गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं । उत्तर प्रदेशको जौनपुर जिल्लाको मडियाहूं थाना क्षेत्रको अम्बरपुर गाउँको एक तस्वीर इन्टरनेटमा दुःखद् कमेन्टसहित भाइरल भयो । यस तस्वीरमा एक व्यक्तिले आफ्नी पन्तीको शवलाई साइकलमा राखेर उभिएको दुःखद् तस्वीर देखाइएको छ । केही तस्वीरमा उनले आफ्नी मृत श्रीमतीको शवलाई समाएर बसेको तस्वीर भाइरल भएको हो ।
उनी ५५ वर्षीय तिलकधारी सिंह हुन् । उनकी पत्नी राजकुमारी देवीको मंगलबार जैनपुरको सदर अस्पताल बाहिर कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो । सरकारी एम्बुलेन्सले राजकुमारीको शवलाई गाउँसम्म त पुर्‍याइदियो । तर कोरोनाको डरका कारण उनकी श्रीमतीको अन्तिम संस्कारको लागि गाउँका कोही पनि आउन मानेनन् । त्यसपछि उक्त महिलाको जौनपुर प्रहरीले नै अन्तिम संस्कार गराएको थियो ।
अन्तिम संस्कारमा भयो विरोध जौनपुरका अतिरिक्त प्रहरी अधीरक्षक (ग्रामीण) त्रिभुवन सिंहका अनुसार तस्वीर प्रहरीसम्म पुगेपछि मडियाहू थानाका प्रहरी गाउँ पुगे र अन्तिम संस्कार गराए । तर त्यतिबेला पनि गाउँका कोही पनि अन्तिम संस्कार गराउन आएनन् ।
त्रिभुवन सिंहका अनुसार प्रहरीले गाउँको नजिकै रहेको सानो नदीको किनारामा ती महिलाको अन्तिम संस्कार गराउन लागेको थियो । तर यसबारेमा गाउँलेले विरोध गरेपछि प्रहरीले जौनपुरको रामघाटमा महिलाको अन्तिम संस्कार गराएको थियो ।
सिंह भन्छन् ‘जब प्रहरी गाउँमा पुगेको थियो तब तिलकधारी सिंह लासको नजिकै बसिरहेका थिए । गाउँका केही व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित पनि भएका थिए ।
सोही गाउँका एक युवक चन्दन सिंहले तिलकधारी सिंहको घर गाउँबाट छुट्टै रहेको र आफ्नी श्रीमतीको मृत्युको बारेमा उनले कसैलाई पनि खबर नगरेको दाबी गर्छन् ।
पत्नीलाई लगेका थिए अस्पताल चन्दन सिंहका अनुसार राजकुमारी देवीको स्वास्थ्य केही दिनदेखि खराब भइरहेको थियो । सोमबार तिलकधारी सिंहले आफ्नी पत्नीलाई सदर अस्पतालसम्म पु¥याएका थिए । तर उनले अस्पतालमा पत्नीलाई भर्ना गराउन सकेनन् ।
चन्दनका अनुसार तिलकधारी मोबाइल बोक्दैनन् । जब पत्नीको मृत्यु भयो त्यसपछि उनले पत्नीको शव लिएर घर फर्किए । पत्नीको मृत्यु भएको दिन करिब साढे ११ बजे उनले पत्नीलाई घर ल्याएका थिए । कोरोनाका कारण अधिकांश व्यक्ति घरमै रहेकोले कसैले पनि थाहा नपाएको चन्दनले बताए ।
चन्दन भन्छन् ‘घर ल्याएर उनले कसैलाई पनि नभनी शवलाई साइकलमा राखिरहेका थिए । त्यतिबेला दिउँसोको साढे २ जति बजेको थियो होला । उनको साइबलबाट बीचैमा शव झर्यो । नजिकैको नदी किनारामा अन्तिम संस्कार गर्न खोज्दा गाउँलेले विरोध गरे ।’ चन्दन स्वयंले उनकी पत्नीको अन्तिम संस्कारमा दाउरा खोज्न सहयोग गरेको बताए ।
दाबीमा देखियो विरोधाभास यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय पत्रकार र प्रंहरी अधिकारीले भने राजकुमारीको अन्तिम संस्कारको लागि प्रहरी पुग्नुपूर्व कोही पनि गाउँले त्यहाँ पुगेका थिएनन् । जब प्रहरी मृतकको घरमा पुग्यो र नदीको किनारामा पु¥याएर अन्तिम संस्कारको तयारी ग¥यो । तब स्थानीयले कोरोना महामारीको हवाला दिँदै विरोध गरे ।
अतिरिक्त पुलिस अधीरक्षक त्रिभुवन सिंह भन्छन् ‘जब प्रहरी टीम गाउँ पुग्यो, त्यतिबेलासम्म अन्तिम संस्कार गराउनको लागि कोही आएनन् । प्रहरी टीमले पूरै विधिविधान पूरा गरेर अन्तिम संस्कार गराए ।
स्थानीय पत्रकार आरिफ हुसेन भन्छन् ‘साइकलवाला तस्वीर भाइरल भएपछि प्रहरी मृतकको घरमा पुगेको थियो । गाउँका कोही पनि व्यक्ति सामने आएनन् । अहिले गाउँलेहरु यस घटनाप्रति आत्मालोचना गरिरहेका छन् ।
चन्दन सिंहका अनुसार अम्बरपुरको उक्त सानो गाउँमा ४५० जना जतिको बसोबास रहेको छ । अहिलेसम्म उक्त गाउँमा ५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।
चन्दन भन्छन् ‘यदि गाउँमा टेस्ट गराउने हो भने यो संख्या अझै धेरै हुने गर्छ । यहाँका मान्छेमा कोरोनाको महामारीको ठूलो भय छ । धेरै गाउँलेहरु या त खेती गर्न बारीमा जान्छन्, फर्किएपछि घरमा नै बस्ने गर्छन् ।’
तिलकधारी सिंह गाउँमा आफ्नी पत्नीका साथ एक्लै बस्ने गर्थे । उनकी छोरी छिन् तर उनको विवाह भइसकेको छ । उनको एक छोरा पनि छन् । तर उनी अहिले दिदीको घरमा नै बस्ने गर्छन् । तिलकधारीको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । –बीबीसी हिन्दीबाट
अनलाइन क्लासबाटै शिक्षक र विद्यार्थीबीच माया बस्यो, प्रेमपछि बिहे
लकडाउनको समयमा कसरी टाइम पास गर्ने ? महानायक राजेश हमालले सुझाए यस्ता उपायहरु
May 5, 2021 Nepstok
फेरि पुलिस ले गर्न नसकेको काम गरेर देखाइदिए सन्तोष देउजा ले , भारत मा पुगेर न्याय दिलाए (भिडियो हेर्नुहोस
April 12, 2021 Nepstok